एक शिक्षकले छात्रलाई ४० सेकेन्डमा १८ थप्पड लगाए !! भिडियो भयो भाईरल । (भिडियो सहित) « गोर्खाली खबर डटकम
एजेन्सी, ३ वैशाख । सोशल मिडियामा प्रत्येक दिन कुनै न कुनै भिडियोको चर्चा हुने गरेको छ । यसै क्रममा एक शिक्षकले कोचिङ्ग सेन्टरमा एक छात्रलाई थप्पड हानेको घटना तेज गतिले भाईरल भइरहेको छ । यस भिडियोले सोशल मिडियाको दुनियाँलाई हल्लाई दिएको छ ।
यहि कारणले सवै ठाउँमा यसको चर्चा भएको छ । यस भिडियोले यति आतङ्क मचायो कि जिल्ला प्रशासनले कोचिङ्ग सेन्टरमा वार्निङ्ग जारी गरिदिएको छ । यस भिडियोमा फैयाज अहमद वागएको रुपमा चिनिएका एक शिक्षकले छात्रलाई थप्पड हानेको देख्न सकिन्छ । एक अनुमानको मुताविक उक्त शिक्षकले छात्रलाई १८ थप्पड हानेका छन् ।
श्रीनगर स्थित होप क्लासेसको उक्त भिडियो सोसल मिडियामा चर्चाको विषय वनेको छ । भिडियो हेरेर यस्तो लाग्छ की छात्रले शिक्षकसँग कुनै पनि कुरालाई लिएर स्विकृती नलिएको भान हुन्छ । यसको वारेमा अहिलेनै केही भन्न नसक्ने स्थिति छ ।
सदर पुलिस स्टेशनको स्टेशन हाउस अफिसर रइस हुसैनले भने, हामीले घटनाको विषयलाई लिएर रिपोर्ट दर्ता गराईसक्यौं । अव यस भयाहव कारवाहीले लोकल मानिसलाई धेरै आक्रोसित वनाएको छ । जसको असर विद्यार्थिहरुको पर्न सक्छ । श्रीनगरको मुख्य शिक्षा अधिकारीले दोषी शिक्षक तथा उक्त संस्थान माथि सख्त कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।
यो सम्वन्धमा उक्त शिक्षकले लोकल मिडियामा आफु उक्त विद्यार्थिको भलो नै चहाने शिक्षक भएको र त्यो समय आफुले नियन्त्रण गुमाएर गलतीले थप्पड हानेको वताएको छ । लोकल मानिसहरुले शिक्षकको साथ साथ कोचिङ्ग सेन्टर एसोशियसनको विरुद्द कडा असन्तुष्ट व्यक्त गरेका
This Brutality by Fayaz Ahmad Zewali who happens to teach chemistry at Hope classes parraypora is Unacceptable. How canateacher be abusive like this? This is insane. Requesting @AsadamAijaz @Junaid_Mattu to take strict action. @islahmufti @RJNASIROFFICIAL @rj_vijdan pic.twitter.com/TIM5WhnR7W
— Nasir Khuehami (ناصر کہویہامی) (@NasirKhuehami) April 14, 2021